किन आवश्यक छ सशक्त प्रतिपक्ष ? - NayaNepal News
Home नयाँ नेपाल विशेष किन आवश्यक छ सशक्त प्रतिपक्ष ?
किन आवश्यक छ सशक्त प्रतिपक्ष ?
नयाँ नेपाल न्यूज डेक्स,
काठमाडौं । लोकतान्त्रिक व्यवस्था त्यसमा पनि संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुकमा वलियो र रचनात्मक प्रतिपक्षको आवश्यकता महशुस गरिन्छ । सत्ताको चरित्र नै शासकिय मानसिकता वाट प्रभावित भएको हुन्छ । जनताको अभिमतलाई शासकिय अधिकार ठान्ने प्रवृति शत्तासिनहरुमा रहन्छ । त्यो मनस्थितीका साथ सरकार चलाउदा जनताका अधिकार संकुचित र निस्प्रभावी रन्छन् । जनतामा असन्तुष्टी बढ्छ, शासन संचालनमा यस्तो अवस्था सृजना विस्तारै सरकार माथि मात्रै होइन, राजनीतिक दल र व्यवस्था माथी नै अविस्वास पैदा हुन जान्छ जसको परिणाम निरंकुशता जन्मिन सक्छ ।
माथी उल्लेखित अवस्था आउन नदिन संसदीय लोकतान्त्रिक संविधान भएका मुलुकमा शक्तिपृथकीकरणका साथै नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका वीच अधिकार नमिचुन भनेर सन्तुलन कायम गर्ने गरि संविधानमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । साथै प्रतिपक्ष दलहरुलाई पनि राज्य संचालनको अभिन्न अंङ्गको रुपमा लिइन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका
नेपालको संविधानले पनि वहुलवादमा आधारित संसदीय शासन व्यवस्थालाई आत्मासात गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका संसद, संसदीय समिति, संवैधानिक परिषद आदीमा अपरिहार्य वनाएको छ । त्यस अर्थमा सरकार जसले संसदमा वहुमत सिद्ध गर्दछ उसले वनाउँछ । अल्पमत पक्ष प्रतिपक्षमा हुन्छ । त्यसमा पनि सरकारमा संलग्न दलहरु पछिको सवैभन्दा ठुलो दल अर्थात विपक्षमा रहेको ठुलो दल प्रमुख प्रतिपक्ष हुन्छ । प्रम्ुख प्रतिपक्ष जति क्रियासिल, अध्ययनसिल, रचनात्मक र जनआवजलाई सडक र सदनमा मुखरित गर्न सक्दछ । सरकारवाट जनताका अधिकारलाई हनन तथा मिच्ने कार्य कम हुन्छ । सरकारलाई पादर्शिक र जवाफदेहि वनाउन प्रमुख प्रतिपक्षको उत्तिकै भुमिका हुन्छ । जनताका आवाजलाई प्रतिपक्षले उठाउदा उठाउदै पनि संसद तथा अन्य निकायमा सुनुवाइृ भएन भने त्यस्तो अवस्थामा सडकमा आउन आह्वान गर्दा आफ्नो मुद्दा ठानेर जनता सडकमा आउछन र सरकारलाई दवाव पर्न जान्छ । तसर्थ प्रतिपक्षको विरोध जनताका दैनिकी र आवाज सँग जोडिन सक्नु पर्दछ । जनविरोधी कार्य गर्न नदिने मात्र होइन जनपक्षिय र राष्ट्रहित अनुकुल कार्यसम्पादन गर्न सरकारलाई वाध्य पार्ने स्थिती खडा गर्न सक्नु नै वलियो, सशक्त र रचनात्मक प्रतिपक्ष हुनु हो ।
मुलुकमा हाल दुईतिहाइ वहुमतको सरकार छ जसले आफु अनुकुल कानुन वनाउन र कार्यान्वयनमा जलैजान सक्ने गणितिय आधार राख्दछन् । लामो समय सम्म देखि कम्यूनिष्ट सिद्धान्त प्रशिक्षत गर्दै आएका नेताहरु संविधानमा जे लेखिए पनि त्यतै तिर ढल्कने खतरा रहन्छ । त्यसलाई रोक्न सक्ने जनमत निमार्ण गर्न विषयगत र मुद्दागत रुपमा जनतालाई प्रष्ट सँग प्रमुख प्रतिपक्षले बुझाउन सक्नु पर्दछ ।
कता हरायो छायाँ सरकार
सरकारका क्रियाकलापलाई प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री सम्मले गर्ने निर्णयहरु र कार्यसम्पादन माथी निगरानी, खवरदारी र नियन्त्रण विभागीय गर्न बनेको छायाँ सरकारको गतिविधि प्रभावकारी देखिएको छैन । हरेक मन्त्रालयमा वेथितीले सिमा नाघनै लाग्दा पनि प्रम्ुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको छायाँ सरकारले चिरफार गर्न सकेको छैन । संचारमाध्यमहरुमा आएका सतही विषय लाई मात्र आधार मानेर वोल्ने भन्दा पनि आफैले खोज अनुसन्धान गरेर वेथिती र गलत काम कार्वाहीलाई वाहिर ल्याउन सक्नु पर्दछ ।
आन्तरिक व्यवस्थापन समयमै गर्ननसक्दा त्यसैमा नेपाली कांग्रेस रुमलिन पुगेको छ । चारवर्ष कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि विभाग गठन गर्न नसक्नु, ढिलै भएपनि अव गरौं भन्ने तत्पर्ता नहुनुले पार्टी संगठनमा यसको प्रभाव नराम्रो सँग परेको छ । कार्यकर्ता जिम्मेवार विहिन छन् । प्रदेश समिति कसरी वनाउने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । नेताहरुका आ–आफ्नै स्वार्थ छन्, के गर्दा आफँु र आफ्नो पक्षलाई १४औं महाभिवेशनमा फाइदा पुग्छ । पार्टी संगठन कसरी वलियो वनाउने र आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताउने भन्ने तर्फ ध्यान कम शत्ति संचय तर्फ ध्यान ज्यादा जाँदा संगठन भुत्ते भएको छ । यो क्रम कहिले सम्म भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहेसम्म कांग्रेसमा सुधार छैन ।
१५–१६ महिनाको समय सम्म पनि काम गर्नलाइृ काफी हुन्छ । त्यसले भ्रातृ संस्था, विभाग र प्रदेश समिति यथासिघ्र गठन गरेर संगठनलाई चलायमान वनाउन सके कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो स्थान परिर्वत गर्न सक्दछ । परिवर्तित कांग्रेसले मात्र जनचाहना पुरा गर्न सक्ने सामाथ्र्य राख्दछ तसर्थ कांग्रेसले आफुलाई सशक्त र जनमुखी वनाउनको विकलप छैन ।
Previous article‘रातो टिका निधारमा’को गीत सार्वजनिक (भिडियो सहित)
Next articleपूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लरका हट तस्वीर हेर्नुहोस्
तस्विरमा हेरौं, नेमकिपाको सातौँ महाधिवेशन
प्रकाशकियः हामी दोस्रो वर्षमा
ओलीको राष्ट्रवाद सरकारमा पुगेपछि सकियो त !